Home News Al-shabaab oo sheegtay in ay Dishay Xildhibaan Hore!!
Kooxo hubeesan ayaa shalay Xaafada Cali Shire ee degmada Howl Wadaag waxa ay ku dileen Nabadoon Xuseen Geedi Jimcaale oo la sheegay in uu kamid ahaa Xildhibaanadii dowladii Carte ee lagu soo dhisay dalka Jabuuti.
War lagu baahiyay baraha ay Internetka ku leeyihiin Al Shabaab ayaa lagu sheegay in dilka Nabadoonka ay ka dambeeyeen dagaalyahano katirsan Al Shabaab ,kuwaa oo dilka kadib goobta si nabad galyo ah uga baxsaday.
Al Shabaab ayaa sheegtay in Nabadoonka la dilay uu horey usoo noqday Xildhibaan, waxa ay sidoo kale Al Shabaab sheegeen in uu kamid ahaa Ergadii Xildhibaanada kusoo doortay magaalada Cadaado.
Warka lagu baahiyay baraha Internetka ee Al Shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in Nabadoon Xuseen Geedi oo wax ka waday abaabulka ciidamo loo sameenayo deegaano katirsan Galmudug.
Nabadoonka ayaa shalay lagu dilay banaanka hore ee gurigiisa, waxaana dilka Nabadoonka aad uga naxay dadka deegaanka oo sheegay in uusan xiligan ku lug laheyn siyaasada isdiidan ee dalka.